Pirate metal - ဝီကီပီးဒီးယား
Speed metal, Folk metal
၁၉၈၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်း (ဂျာမနီနိုင်ငံ)၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)
လျှပ်စစ်ဂစ်တာ၊ ဘေ့စ်ဂစ်တာ၊ ဒရမ်များ၊ ကီးဘုတ်၊ နှင့်/သို့ folk instruments
Pirate Metal သည် heavy metal၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ဓားပြ ဒဏ္ဍာရီများကို ဂီတအတွင်း ပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ စာသားများမှာ မကြာခဏ ပင်လယ်ဓားပြနှင့်ဆိုင်သော ဗန်းစကားများကို အသုံးပြုထားသည်။ အမျိုးမျိုးသော ဂီတအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ thrash, speed metalနှင့် folk metal ပါဝင်ပြီး traditional-sounding song များဖြစ်သော sea shanties နှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ folk instrument ဖြစ်သော bandonea တို့ပါဝင်ပြီး ပေါင်းစပ်ထားသည်။ (သို့)Synthesizers တို့နှင့် လုပ်ဆောင်ထားသည်။ တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များဖျော်ဖြေတင်ဆက်ချိန် အတောအတွင်းတွင် ရှေ့ခေတ် အဝတ်အစားများကို မကြာခဏ ဝတ်ဆင်ကြသည်။ pirate metal သည် ဂီတပုံရိပ်အနေဖြင့် media ဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။
အစောပိုင်း pirate metal ဥပမာအနေဖြင့် ၁၉၈၇ တွင် ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဂျာမနီ heavy metal တီးဝိုင်း Running Wild ၏ တတိယမြောက် album Under Jolly Roger ဖြန့်ချိချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ Rolf Kasparek အဆိုရ (Running Wild၏ lead singer နှင့် guitarist ) album ၏ ပင်လယ်ဓားပြအကြောင်းအရာကို တိုးတက်ရန် အစီအစဉ်မရေးဆွဲထားခဲ့ဟု ဆိုသည်။ နောက်ဆုံးတွင် album ၏အနုပညာလက်ရာများကို ခေါင်းစဉ်နှင့် လိုက်ဖက်ရန် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ တန်ဆာဆင်မှုနှင့် ရှေးခေတ်ဝတ်စုံများကို အနာဂတ်တေးဂီတများအတွက် ဒီဇိုင်းဆင်ခဲ့သည်။ Kasparek သည် ပင်လယ်ဓားပြအကြောင်းအရာများကို စတင်ဖတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူတို့၏ဂီတထဲတွင် အကြောင်းအရာများကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ လေးခုမြောက် album Port Royal ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတွင် သူတို့၏ပုံစံသည် ခိုင်မာလာခဲ့သည်။ Kasparek သည် Golden Age of Piracy ၏အမှန်တကယ်သမိုင်းများကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သော်လည်း pirate metal သည်ပမာဏ ပို၍ ကျယ်ပြန့်စေရန် လှုံဆော်စေခဲ့သည်။ ဝတ္ထုရှည်များနှင့် Hollywood films များတွင် သရုပ်ဆောင်စေခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်အကြာ ၂၀၀၆ တွင် Christopher Bowesနှင့် Gavin Harper သူတို့၏ တီးဝိုင်း Battle heart ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Napalm Records တွင် label (သို့) သူတို့ကို လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။ Bowes နှင့် Harper Alestorm အဖြစ် နာမည်ပြောင်းရန် စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ Myers၊ Ben။ "Scene and heard: Pirate metal"၊ guardian.co.uk၊ Guardian Media Group၊3August 2009။ 14 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 May 2011။ "Pirate metal: This speed metal subgenre..."
↑ Gotrich၊ Lars။ "Alestorm: Play Metal Like A Pirate Day"၊ NPR၊ 18 September 2009။ 16 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 18 May 2011။ "Genre: Pirate Metal"
↑ "They are the pirate kings"၊ The Sydney Morning Herald၊ Fairfax Media၊ 15 May 2011။ 19 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 May 2011။ "... an obscure genre called pirate metal."
↑ Bowar၊ Chad (7 August 2009)။ Swashbuckle Interview: A Conversation With Vocalist/Bassist Admiral Nobeard။ About.com။ 18 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bowar၊ Chad။ Alestorm - Captain Morgan's Revenge Review။ About.com။ 15 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lane, Jordan. "Verbal Deception: Yo ho ho andapitcher of Molson". BeatRoute Magazine. Retrieved on 15 May 2011. Archived 18 May 2011 at WebCite
↑ ၇.၀ ၇.၁ Holmes၊ Mark (29 April 2009)။ Interview with Dani Evans (Alestorm) – Part 1/2။ Metal-Discovery.com။ 14 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rademacher၊ Brian (10 April 2005)။ Interview: Rolf Kasparek (Running Wild)။ Rock Eyez.com။ 14 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ Fust၊ Martin (February 1996)။ Martin Fust Interviews Rolf Kasparek။ Running-Wild.net။ 14 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Frederick၊ Carl (May 1996)။ Carl Frederick Interviews Rolf Kasparek။ Running-Wild.net။ 14 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Klein၊ Lewis။ Interview with Alestorm's Chris Bowes။ Metal Mayhem UK။ 18 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirate_metal&oldid=645070" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။